Farshaxanku waa farriinta, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Saynisyahannada bulshada ayaa adeegsada ereyo xiiso leh si ay u sharxaan waqtiga aan ku nool nahay. Waxaad u badan tahay inaad maqashay ereyada "premodern", "casri" ama "gadaal". Runtii, qaar baa u yeera waqtiga aan ku noolahay adduunyada dambe. Saynisyahannada bulshada ayaa waliba soo bandhigaya farsamooyin kala duwan oo loogu talagalay isgaadhsiinta wax ku oolka ah jiil kasta, ha ahaato “dhisiye”, “kuwa wax dhisa”, “basas”, “X-ers”, “Y-ers”, “Z-ers”. ama "muusiki".
Laakiin iyadoo aan loo eegayn adduunka aan ku nool nahay, isgaarsiinta dhabta ahi waxay dhacdaa oo keliya haddii labada dhinacba ay gaaraan heer faham oo ka sarreeya maqalka iyo hadalka. Khubarada isgaarsiinta ayaa noo sheegaya in hadalka iyo dhageysigu aysan aheyn dhamaadka laftiisa, laakiin ay tahay hab lagu gaaro dhamaadka. Fahanka dhabta ahi waa hadafka wada xiriirka. Sababta oo ah qofku wuxuu dareemaa fiicnaan sababtoo ah "waxay shubeen fikirradooda" ama dhinaca kale waxay u maleynayaan inay fuliyeen waajibaadkooda sababtoo ah waxay dhegeysteen qofka kale waxayna u oggolaadeen inay yiraahdaan macnaheedu maahan inay dhab ahaantii la fahmay. Markii aad si dhab ah isu fahmi weydeen, runti iskuma xiriirteen - waad iska hadashay oo waad dhagaysaneysay adigoo aan isfahmin. Way ka duwan tahay xagga Ilaah. Ilaah fikradiisa oo keliya lama wadaago oo wuu ina dhagaystaa, wuxuu noolala hadlaa fahmo.
Marka hore: Wuxuu ina siinayaa Kitaabka Quduuska ah. Baybalku maahan buug keliya; Waa waxyiga Eebbe noogu soo dejiyey. Kitaabka Quduuska ah, Ilaah ayaa ka sheekaynaya cidda uu yahay, inta uu na jecel yahay, hadiyadaha uu na siinayo, sida aan ku baran karno isaga, iyo sida ugu wanaagsan ee loo qaabeeyo nolosheena. Baybalku waa khariidad dariiqyada nolosha oo aad u faro badan oo Eebbe doonayo inuu ina siiyo sida carruurtiisa. Laakiin sida ugu weyn ee Kitaabka Quduuska ahi yahay, ma ahan qaabka ugu sarreeya ee isgaarsiinta. Nooca ugu sareeya ee xagga xidhiidhka ka yimaadda xagga Ilaah waa muujinta shakhsi ahaaneed ee loo maro Ciise Masiix - oo aannu wax kaga baranno Kitaabka Quduuska ah.
Hal meel oo aan tan ku aragno waa Cibraaniyada 1,1: 3: «Ka dib markii Ilaah marar badan awowayaashiis kula hadlay nebiyadii, wuxuu noola hadlay maalmihii ugu dambeeyay wiilkii uu magacaabay. waa inuu dhaxlo wax kasta oo uu dunida ku sameeyay. Isagu waa muujinta ammaanta ammaanta iyo sumcadda jiritaankiisa, wax walbana ereygiisu xoog buu ku qaataa. » Ilaah wuxuu inoogu gudbiyaa jacaylkiisa innaga mid ahaadee, isagoo la wadaagaya bini-aadamnimadeenna, xanuunkeenna, tijaabooyinkeenna, welwelkeenna, iyo qaadista dembiyadeenna nafteenna, innaguna dhammaantood waannu cafinnay iyo Ciise oo ah meel ku habboon Aabbaha. diyaariyaa.
Xitaa magaca Ciise wuxuu sheegayaa jacaylka Eebbe noo qabo: magaca "Ciise" macnaheedu waa "Sayidku waa Badbaado". Magac kale oo ciise ah waa "Imman", oo macnaheedu yahay "Ilaah baa inala jooga". Ciise maahan oo keliya Wiilka Ilaah, laakiin sidoo kale waa Ereyga Eebbe, oo isagu ina siiya Aabbaha iyo doonista Aabbaha inagu leeyahay.
Injiilka Yooxanaa wuxuu inoo sheegayaa:
"Ereyguna jidh buu noqday, oo wuu ina dhex joogay, oo waxaannu aragnay ammaantiisii, taas oo ahayd ammaanta u ekayd tan Wiilka keliya ee Aabbaha, ee nimco iyo run ka buuxa." (Yooxanaa 1,14:6,40) ». Sida Ciise inoogu sheegay Yooxanaa, waa rabitaanka aabaha "in ku alla kii arka wiilka oo rumaystaa uu leeyahay nolosha weligeed ah" Eebbe laftiisa ayaa qaatay talaabada aan ku baran karno isaga, oo isagu wuxuu nagu martiqaadayaa inaan la hadalno isaga shaqsi ahaan markaan akhrino Qorniinka, salaadda, iyo wada noolaanshaha dadka kale ee isaga yaqaan. Horaa uu adiga kuu yaqaan. Miyaanay ahayn waqtigii aad ku baran lahayd isaga?